ग्लास। तयारीको र प्रयोग। ग्लास पग्लनेबिन्दु
सबैभन्दा पुरानो सामाग्री को रूपमा, ग्लास वर्ष हजारौं, केवल एक लागि मानिसजातिको द्वारा प्रयोग गरिएको छ। यो सामाग्री को बहुमुखी उहाँलाई उद्योग को एक किसिम मा प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभयो। ग्लास को Physico-रासायनिक गुण, अकार्बनिक यौगिकों बुझाउँछ गाह्रो छ, एक amorphous संरचना समानुवर्ती छ।
glassy फारममा flowable, अत्यधिक viscous को एकत्रीकरण को राज्य रूपान्तरण मा विशेषता ग्लास निर्माण प्रक्रियाको प्रत्येक प्रकार को लागि। उत्पादन प्रविधि एक दर पिघल चरण crystallization मा सार्न अनुमति दिन्छ गर्दैन मा यो ठंडा प्रदान गर्दछ।
ग्लास पग्लिने तापमान यसको गुणस्तर र अपेक्षित प्रदर्शन निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, पकाउने एक एकदम व्यापक 300 देखि 2500 ° C तापमान दायरामा ठाउँ लिन्छ। यो पदार्थ को गुण ग्लास-निर्मित पिघल मा समावेश घटक मा निर्भर गर्दछ। सूची एकदम व्यापक छ र आक्साइड, Phosphates, fluorides, र अन्य additives को एक किसिम प्रतिनिधित्व छ। यो क्लासिक मा, पारदर्शिता छैन ग्लास को विभिन्न प्रकार प्रकृति मा निरन्तर र उत्पादन को पाठ्यक्रम मा संश्लेषित लागि अन्तिम सुविधा छ।
सबैभन्दा प्राचीन ग्लास शिल्प, मिति सात शताब्दीयौंदेखि ई.पू. देखि, archeologists मिश्रको उत्खनन मा लगे भेटे। यी मोती र amulets थिए। तर केही हजार वर्ष पछि, पहिलो औद्योगिक बिरुवाहरु को आगमन सम्म, अठारौँ शताब्दीको ग्लास कारखानों। शुल्क मा ग्लास उत्पादन को एक सुविधा कोइला प्रयोग गरेर द्वारा र इस्पात बयलर पग्लिने लागि प्राप्त ग्लास को पग्लिने बिन्दु बन्द छ।
इन्धन काठ रूपमा प्रयोग गर्न पूर्व, ग्लास-लामो कार्यशालाओं छरिएका भट्टीमा र चाँडै क्षेत्र मा खपत भएको इन्धन ठाउँमा थिए। को बयलर खुला थिए, काठ पदार्थ उत्पादन उत्पादन को पारदर्शिता र रंग असर जारी गर्दैन। प्रकार को ग्लास पग्लिने प्रक्रिया मा तापमान पुग्यो 1450 ° सी
एउटा महत्त्वपूर्ण घटना प्रारम्भिक XX सताब्दी मा आविष्कार यसको विकासकर्ता Emilya Furko, मिसिन हुड एउटा तरिका प्रस्तावित गर्ने पछि नाम समतल ग्लास विधि को उत्पादन, थियो। यसलाई अस्तित्व 1959 सम्म, यो फ्लोट विधि, कम्पनी "PILKINGTON" विकास द्वारा अधिक्रमित थियो।
एक पारंपरिक ग्लास को मुख्य घटक 69-74%, सोडा (12-16%), चूना र डोलोमाइट (5-12%) को एक अनुपात मा सिलिका बालुवा छ। तर उत्पादन प्रक्रिया मा महत्वपूर्ण मात्र होइन जो मा ग्लास पिघलने तर जो दर ठंडा ढल्छ तापमान छ। सिद्धांततः, तीव्र ठंडा मा प्राप्त गर्न सकिन्छ काँच समान र धातु, क्रिस्टल जाली गठन गर्न पिघल शांत मुख्य समय।
जब समय पारंपरिक ग्लास को आकर्षक गुण सबै किसिम बढि टिकाउ र हल्का पारदर्शी सामाग्री को लागि एक जरुरी आवश्यकता छ। सबै को पहिलो, यो विमान निर्माण मा विशेषज्ञता, उद्योग छोयो छ। Plexiglas मात्र परम्परागत ग्लास एउटा बाहिरको समानता यसको नाम पायो।
यसको प्रभाव प्रतिरोध अप पाँच गुना गर्न, यो 2.5 पटक गर्न सजिलो छ। यो 92% को प्रकाश प्रसारण को स्तर पुग्छ, यो बुढेसकालको एक उच्च प्रतिरोध छ। प्रक्रिया मा धेरै सजिलो र थप किफायती plexiglass। पग्लिने बिन्दु plexiglass जो यो गर्मी उपचार हुन अनुमति दिन्छ, 90-105 डिग्री भित्र छ।
तर यी सामाग्री दुवै आधुनिक कार्यस्थल हरेक आला लिएका छन्। परम्परागत अकार्बनिक ग्लास दृढ यसको स्थिति धारण र नवीनतम लिन छैन जाँदै छ जैविक पलिमर।
विभिन्न अशुद्धताओं र additives को एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रयोग गरेर ग्लास को एउटा अचम्मको छैन केवल अप्टिकल विशेषताहरु प्रदान गर्दछ, तर पनि एकदम यसको यांत्रिक गुण सुधार।
औद्योगिक आवेदन साथै, यो कला ग्लास को भूमिका ध्यान दिनुहोस् छैन असंभव छ। पुरातन कलाकारहरूको को परम्परा जारी मास्टर glassmakers, साँचो कला मा ग्लास बनेको masterpieces सिर्जना गर्नुहोस्। आफ्नो कार्यशालाओं मा फर्नेस आफ्नो काम मा लगभग हात काम, ग्लास पग्लिने तापमान पुगेको छैन मात्र तिनीहरूले उल्लेखनीय कल्पना देखाउन, तर पनि शारीरिक प्रयास धेरै खर्च गर्छन्।
फूल संरचना: सामान्य विवरण
Laureth सोडियम सल्फेट के हो?
उच्च र तल्लो माग। तल्लो मानव आवश्यकता कुन सामाजिक भूमिका के?
Evgeniy Ponasenkov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, परिवार, फोटो
Chechnya विशेष गरी, होटल, सेवा र समीक्षा मा आराम
होम्योपैथिक दबाइहरु - यो के हो? होम्योपैथिक उपचार कसरी लिने?
वी तस्वीर Khabarova "Mila को पोर्ट्रेट।" संरचना
GDDR5 - यो भिडियो कार्ड मा छ? DDR SDRAM स्मृति पाँचौ पुस्ता
Endometriosis कस्तो व्यवहार गर्ने? endometriosis: र आफूलाई यो रोग बाट कसरी सुरक्षित गर्ने यो के हो
धनु - एक ... वचन "प्याज" को परिभाषा र अर्थ
कसरी लामो समय को लागि आफ्नो प्रेम एक साथ सम्बन्ध राख्न?
टाढा पहुँचका लागि कार्यक्रम। सबै भन्दा राम्रो उपकरण को समीक्षा